Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa! Q5 | Abdikadir Askar
October 16, 2016 / Abdikadir Askar(AA)
Yugaandha, waa dal Ilaahay ku manaystay dhul dihin oo beerashada ku wacan. Haddii si fiican dalka loo beeri lahaana, waxa hubaal ah in cuntada laga soo saaraa ku filnaan lahayd Afrika oo dhan!
Dhaqaalaha dalku waa mid kobcaya, kunna socda xawaare dhan 5.6 % sannadkiiba. Werwerka ugu weyn ee jiraa waa sugnaan la’aan siyaasadeed. Madaxweyne Musevani iyo qoyskiisa ayuun bay talladu ka ururtaa, dastuurkana waxa ay ka dhigteen shaadh iyaga leeg, oo ay ugu adeegtaan kolba sidii ay doonaan. “Dal ba’ow yaa ku leh?” ayuu qofkii booqdaana is-weydiinayaa.
Yugaandha waxa ku nool dadka dunida ugu dhallinyarsan. 77% waxa ay ka yar yihiin 30 jir. Haddana shaqo la’aanta dhallinyartu waxa ay ka badan tahay 60%. Waxa taas u sii dheer farqiga nololeed ee kaaga muuqanaya bulshada Yugaandha .Waxa jira dad aad u taajiray, oo badh-badhaadhnay qaadaya. Iyo dad aad u dan-yar ah, oo beerka iyo bogga iska haya.
Goob kasta oo aad dan u yeelato Kampala, haddii ay noqoto bangi, hudheel, maktabad, maqaaxi iyo meheraddaha kaleba, waxa maamula ama iska leh dad Hindi u badan.
Hindida, amma dadka reer Aasiya, waa dadka ugu badan ee wareejiya giraanta ganacsi ee Yugaandha.In kasta oo ay saameyntoodu yar tahay, marka la barbar dhigo sidii ay ahaayeen sannadkii 1972kii, oo 90% ganacsiyada dalka ka shaqeeya, iyagu lahaayeen.
Bal aan dib ugu laabano badhtamaha magaalo madaxda Kampala.
Buurta Nakesero waa mid ka mid ah todobadda buurood ee ay Kampala caanka ku tahay. Waa bar-kulmiska dhammaan shaqooyinka dawladda iyo ganacsigga Yugaadha. Waxa ku taal madaxtooyadda koowaad, xarumaha dawladda ee kala duwan, safaaraddaha, bangiyadda caalamiga ah, hudheeladda waaweyn, istaanka gawaadhida iyo tareenadda. Waxa u shaqo tagga dad ka badan hal milyan oo qof. Si kooban, waa ‘mishiinka’ laga daaro dalka Yugaadha.
Qaar ka mid ah dhismayaasha qurxoon ee laga dhisay degmo-ganacsiyeedka Nakesero.
Adiga oo Kampala jooga, oo aan haddana booqan suuqa weyn ee Owino, weli maad noqon ‘Baladi’. Wuxu ku yaalla badhtanka magaaladda, gaar ahaan cidhifka galbeed ee Buurta Nakesero.
Suuqa Owino, waa ka labaad ee ugu weyn Afrika ee lagu iibiyo alaabta gacanta labaad, kunna fadhiya dhul dhan 7.04 hictaar. Waxa loogu magac daray oday ganacsadde wadhato ah, oo ku iibin jiray xasiidda iyo bardhada macaan isla goobtaas, hillaadii 1971. Xilli ku beegan goortii ay ay hirgelisaysay, dawladda hoose ee Kampala.
Kama duwana suuqayada Waaheen ee Hargeysa ama Bakaaraha ee Muqdisho. Waa suuq camiran, oo dadka wax kaa iibinayaa ku jiidanayaan, kuguna qasbayaan badeecadda ay gadayaan. Dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda, waxa gacanta ku haya dad dumar u badan. Waanna meel aad ka heli karto nooc kasta oo alaab aad u baahato, haddii ay noqoto, raashin, dhar, kabo, shandado, iwm.
OWINO: Suuqa ugu weyn dalka Yugaandha.
Ha yaabin haddii aad la aragto sar dheer oo qurxoon, iyo dhisme gaaban oo fool-xun, oo haddana aan is cawryeyn! Waa Kampala iyo caadadeed.
Marka aad dhex mushaaxayso wadooyinka waaweyn ee Nakesero, waxa hubanti ah in aad la kulmayso niman iyo dumar aad u qaylinaya, gacanta midigna ku sita kitaabka Baybalka. Marka u horaysa waxa aad moodaysaa dad waalan, oo miyir la’. Waa se dad loo laylinayo in ay noqdaan wadaad-kiniisadeed. oo ku sii tababaranaya wadooyinka hareeraheeda, si ay u yeeshaan aftahamino iyo dhiiranaan dadka lagaga hor hadlo.
← Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa! Q4aad
Daa’uuska Afrika- Safarkaygii Dheeraa! Q6aad →